I-2 Gang WIFI Wall Molded Socket Outlet I-SPY efihliweyo yeKhamera, i-70hrs ukurekhoda, i-100hrs imile (SPY220) | Izisombululo ze-OMG
I-OMG 2 Gang WIFI I-Wall Molded Socket Outlet I-SPY efihliweyo yeKhamera, i-70hrs ukurekhoda, i-100hrs imile (SPY220)
Umgcini wevidiyo ofihliweyo: Ncincinci kakhulu kwaye iLinweight, Designing Compact; Inkxaso yekhadi ye-TF ukuya kwi-32GB (ayifakiwe); Ukurekhoda inkxaso kunye nokushaja ngexesha elinye, inkxaso yokurekhoda kwevidiyo.
Eziyimfuneko: Isixazululo seVidiyo: I-HD ye-HD 1280x720P, Thatha ividiyo ecacileyo ephakamileyo kunye nomgangatho wesithombe. I-10,000 mAh lithiyure ibhetri, i-video eqhubekayo yokurekhoda ii-15 iiyure. Ukuxhuma kwifowuni / tablet / PC ngqo ngokuphenya isistim se-WiFi yekhamera. Ungabukela ividiyo kwikhamera ngexesha. Akukho mfuneko ye-WiFi router yokuthumela.
I-10,000 mAh ibhetri ye-built-in: ihlala irekhoda kwiiyure ze-15.
inkxaso I-32GB encinci yeTF Card kuMax (Akufakiwe)
Ukufumanisa ukuhamba: Xa kuqhutywe isinyathelo, ikhamera iya kuqala ukurekhoda ngokuzenzekelayo. Kwaye kunye ne-Real-time Video Ukurekhoda, le gadget mini iya kubhala ngokuthembeka isenzo sakho sotwendwe esingahambelwanga ngexesha langempela kunye nekhowudi nganye yefayile ye-1 ngomzuzu. Inkxaso yokurekhoda kwevidiyo yangempela.
Isisombululo seVidiyo: Inyaniso ye-HD 1280x720P,
I-Angle ye-Lens: I-90 Degrees
Ukurekhoda kwevidiyo eqhubekayo: ixhomekeke ku iiyure 15.
12115 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-6 Namhlanje